स्थानीय चुनावको थकाई नमेटिदै, मुलुक फेरि एकपटक चुनावमय हुँदो छ । झन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कारण यो पटकको चुनाव पहिले पहिलेको भन्दा फरक र रोमाञ्चक हुने विश्वासमा छन् कतिपय ।
् आउँदो मंसिर १० र २३१ गते हुन लागेको प्रदेश र केन्द्को निर्वाचन र त्यसपछि चैं पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै दशैं सरप्राइजका रुपमा आएको एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टि नेपालवीचको वर्तमान चुनावी तालमेललाई काउन्टर दिन कांग्रेस नेतृत्वमा राजपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक। संघीय समाजवादी फारेम वीच पनि त्यस्तै किसिमको तालमेल हुने किसिमले कुरा अगाडि बढाए पनि, क्षेत्रीय पार्टिहरुलको बाहुल्यता रहने यो कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन उता वामपन्थी गठबन्धन जत्तिकै बलियो नहुने लख कतिपय विश्लेषकहरको रहेको छ ।
स्थानीय, जातीय, भाषीय र भौगोलिक हिसावमा पनि फरक मत राखेर गठन भएका क्षेत्रीय पार्टीहरु खासगरी मधेसवादीहरुकोसँगको गठबन्धन त्यत्ति आडिलो नहुनेमा कतिपय कांग्रेसीहरु नै विश्वस्त छन् । झन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले तराई मधेसका बिस जिल्लाका दुई तिहाई निर्वाचन क्षेत्रहरुमा आफूहरुले उम्मेदवारी दिने र बाँी एकतिहाई क्षेत्रमा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई छाड्ने रणनीति बनाएको थाहा पाउने कांग्रेसहिरु यो गठबन्धन भालुको कन्पट हुने तर्क गर्नथालेका छन् । झन राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकहरुको उच्च माँगले पनि कांग्रेसजनहरुमा छटपटी बढेको छ ।
गर्भमै नतुहिए पनि बच्चा स्वस्थ होला जस्तो छैन, एकथरिको अनुमान छ । उता एमाले, माकेको गठबन्धनले अझै पनि स्वागतद्वार खोलेर बसेको छ । हुँदाहुँदा मशालका मोहनविक्रम सिंहजस्ता बढावामपन्थीहरु पनि वाम गठबन्धनमा छिर्न आतूर हरेको समचार छ । मोकामा चौका हान्न जान्ने सीपी मैनालीलाई पनि भाग छाड्ने हो भने उनी पनि घोषणा गर्दै यो बाम गठबन्धनमा पक्का छिर्छन् । तर पनि यो वाम गठबन्धनप्रति संशय राख्नेहरु बढ्दै छन् । टुटफुटमा विश्वास राख्ने वामपन्थीहरुको यो एकता आउँदो निर्वाचनसम्मका लागि मात्र टिकाउ हुने हो कि ? एकीकरण त भन्न सकिन्न, भन्नेहरु पनि धेरै छन् ।
झन१२ वर्ष सँगै जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड र बाुरामको त त्यस्तो हविगत भो, यी सत्तास्वार्थका लागि एक भएकाहरुको त कुरै नगरौं । भारतमा प्रमुख भनिएको एनडीए (भाजपा) र यूपीए )कांग्रेस आई)को गठबन्धन झैं त्यस्तै मोडलमा लान खोजिएता पनि यी गठबन्धनहरु धेरै दिन नटिक्ने चैं पक्का छ । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ, विदेशी र स्वदेशी चलखेल, आदि कारणले गर्दा यो गठबन्धन दुई दिनको रमझम... मात्र हो भन्ने धेरैको विश्वास छ । नीति, सिद्धान्त, देश विकासमा आधारित राजनीति भएका मुलुकहरुमा यस्ता गठबन्धन अर्थपूर्ण र कामयाव हुने गरेका छन् । हाम्रोजस्तो मलुकु जहाँ हिजो मात्र एक अर्कालाई सत्तासराप गरिएको थियो, यहाँसम्म कि कुन लिङ्गी हौं भनेर समेत सोधिएको थियो, त्यस्ताहरुको एकता र एकीकरणको हल्ला नौटंकी हो र यस्तो नौटंकी कति दिन चल्ला र ?
धेरै महिना अघि पनि होइन, केही दिन अघिमात्र सम्पन्न स्थानीय चुनावको निर्वाचनका बेला यी सबैले एकदोस्रालाई के भनेर गाली गरेका थिए, गाली र अपमानित गर्न के मात्रै बाँकी राखेका थिए र ? त्यसको रेकर्ड हेरे, यिनको अहिलेको एकता लाजमर्दो लाग्छ जो कसैलाई पनि ।
अनि यो नाटक धेरै दिन लम्बिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
विगत १२ वर्षदेखि यी राजनीतिक तमासेवाजहरुले यस्तै तमासा पटक पटक देखाइसके, अहिलेको ताजा तमासा केही दिनलाई हल्लाखल्ला गर्न रमाइलै होला, त्यसपछि त उही गालीगलौजमा उत्रिने न होलान् यिनीहरु ।
नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टको कम्युन्यालिजम र गुट, टुट र फूट धेरै देखियो । यी जुटेको पनि देखियो तर यिनले फुटेर वा जुटेर कुनै लछारपाटो लगाएको चाहिं केही पनि देखिदैन । यिनको चर्का भाषण, उखान टुक्का र गालीगलौजमा भने यिनले महारथ नै हासिल गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो तमासा वाम केन्द्र, वाम एकता र वाम एकीकरणको अभ्यास हुनपुगेको छ । कुनै दिन कलकत्ताका बुद्ध भट्टाचार्य बन्ने सपना होला यो ?